Kanal အစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်း RayHaber | raillynews
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး34 အစ္စတန်ဘူလ်Canal Istanbul စီမံကိန်း
တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ် Project မှ: Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်တူရကီရဲ့မဟာစီမံကိန်းကြီးစီမံကိန်းအတွက်နေရာအရပ်နောက်ဆုံးမိနစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုယူမှဆက်လက်။ စီမံကိန်းတွင်ကြေငြာမည့်ရက်အတိအကျကို Kanal Istanbul ၏သားကောင်များကစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ပထမဆုံးတူးဖော်မည့်နေ့သို့မဟုတ်တင်ဒါရက်ကိုမကြေငြာသေးပါ။ မည်သည့်အချိန်တွင် Kanal Istanbul ကိုတင်ဒါကျင်းပမည်နည်း။ Channel Istanbul တင်ဒါတင်ဒါကျင်းပမလား ဘယ်အချိန်မှာ Istanbul တင်ဒါရက်လဲ? Kanal Istanbul နောက်ဆုံးမိနစ်နှင့် Kanal Istanbul နောက်ဆုံးသတင်းဤသတင်းအတွက်သတင်းများ .. Channel Istanbul စီမံကိန်းကိုဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုအသစ်များကိုကြုံနေရသည်။ စီမံကိန်းတွင်တရုတ်ကုမ္ပဏီများ၏လိုအင်ဆန္ဒများတိုးများလာနေချိန်မှာ Public Public Partnership နှင့်အတူစီမံကိန်းကိုအမေရိကန်ကဆက်လက်ဖိအားပေးနေသည်။
Channel Istanbul တင်ဒါတင်သွင်းသည့်နေ့ရက်ကို 2020 နှစ်တွင်ကြေညာမည်လား။
2019 မပြီးစီးမှီ Kanal Istanbul ၏တင်ဒါတင်သွင်းမည့်နေ့ရက်ကိုမူမသိရသေးပါ။ စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးတင်ဒါနေ့အတွက် 2020 နှစ်မျှော်မှန်းချက်သည်အလေးချိန်တိုးလာသည်။
တူးမြောင်း Istanbul နောက်ဆုံးလမ်းကြောင်း
Kanal İstanbulစီမံကိန်းကိုYeniköyမှစတင်ပြီးSazlıdereဆည်နှင့်Küçükçekmeceရေကန်ရှိ Marmara နှင့်တွေ့ဆုံလိမ့်မည်။ Kanal Istanbul ၏လမ်းကြောင်းအတိအကျကိုဆုံးဖြတ်ရာတွင်ပထဝီအနေအထားကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပြီးလမ်းကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောကောလာဟလများသည်ဘာသာစကားမှဘာသာစကားသို့လအတန်ကြာပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။
Sabah သတင်းစာ Nazif KAraman ၏သတင်းအရသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်မြို့ပြ ၀ န်ကြီးဌာနသည်စီမံကိန်းအတွက်ဤစီမံကိန်းအတွက်ဇုန်စီမံကိန်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ ၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်အစီအစဉ်ကိုအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသို့ကြိုတင်စစ်ဆေးရန်စေလွှတ်ခဲ့သည်။
စီမံကိန်းကိုမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဦး စီးဌာန IMM ဦး စီးဌာနမှပြန်လည်သုံးသပ်သည်။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှု၏ရလဒ်အနေဖြင့်မြှို့နယ်သည် ၀ န်ကြီးဌာနသို့တင်ပြရမည်။ ၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်နောက်ဆုံးအစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲပြီးပါကအခြားမြူနီစီပယ်နှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများမှထင်မြင်ချက်များကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။ ထို့နောက်အစီအစဉ်၊ IMM နှင့်ခရိုင်မြူနီစီပယ်များအားဆိုင်းငံ့ထားမည်။
သမိုင်း Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်
Bosphorus အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာရေလမ်းကြောင်း၏သမိုင်းသည်ရောမအင်ပါယာသို့ပြန်သွားသည်။ Bitinya Plinius ၏အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်Trကရာဇ် Trajan တို့၏ဆက်သွယ်မှုတွင် Sakarya မြစ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ပင်လယ်နက်နှင့်မာရ်မာရာကိုအတုရေလက်ကြားနှင့်ဆက်သွယ်ရန်စိတ်ကူးမှာ 16 ဖြစ်သည်။ 21 ရာစုကတည်းက6ကြိမ်။ 1500 နှစ်လယ်ပိုင်းတွင် Ottoman အင်ပါယာမှစီစဉ်ထားသောအဓိကစီမံကိန်းများအနက်တစ်ခုမှာ Sakarya မြစ်နှင့် Sapanca ရေကန်ကိုပင်လယ်နက်နှင့် Marmara ပင်လယ်နှင့်ချိတ်ဆက်ရန်ဖြစ်သည်။3သည်ခမ်းနားထည်ဝါသော Suleiman အုပ်ချုပ်ချိန်အတွင်းအစီအစဉ်သို့ရောက်ခဲ့သည်။ ထိုကာလ၏ကြီးမားသောဗိသုကာနှစ် ဦး ဖြစ်သည့် Sinan နှင့် Nicola Parisi တို့သည်စစ်ပွဲများကြားမှဤစီမံကိန်းအတွက်စတင်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်။
မြို့တော်၏ဥရောပဘက်မှာအကောင်အထည်ဖော်လိမ့်မည်။ လက်ရှိပင်လယ်နက်နှင့်မြေထဲပင်လယ်ပင်လယ်အကြားကအခြားရွေးချယ်စရာလမ်းကြောင်းဖြစ်သော Bosphorus တွင်သင်္ဘောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူစေရန်ပင်လယ်နက်နှင့် Marmara ပင်လယ်ကြားရှိအတုရေလမ်းကြောင်းကိုဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်။ ဤလမ်းကြောင်းသည် Marmara ပင်လယ်နှင့်တွေ့ဆုံသည့်နေရာတွင် 2023 မှတည်ဆောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသောမြို့သစ်နှစ်ခုအနက်မှတစ်ခုကိုတည်ထောင်လိမ့်မည်။ ဤလမ်းကြောင်းဖြင့် Bosphorus သည်ရေနံတင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လုံးဝပိတ်ထားပြီးကျွန်းဆွယ်အသစ်နှစ်ခုနှင့်ကျွန်းအသစ်တစ်ခုကို Istanbul တွင်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။
အရှည် 40-45 ကီလိုမီတာ
အကျယ် (မျက်နှာပြင်) 145-150 မီတာ
အကျယ် (အခြေစိုက်စခန်း): မီတာ 125
နက်ရှိုင်း: 25 မီတာ
453 ကိုစတုရန်းမီတာသန်းကျော်ပေါ်တွင်တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားသည်။ အခြားဒေသများကို 30 စတုရန်းမီတာသန်း၊ Ispartakule နှင့်Bahçeehehirစတုရန်းမီတာသန်း၊ 78 သန်းစတုရန်းမီတာရှိသောလမ်းများ၊ 33 သန်းစတုရန်းမီတာနှင့်ဇုန်ခွဲဝေချထားပေးရန်နှင့် 108 သန်းစတုရန်းမီတာနှင့်အတူဘုံစိမ်းလန်းသောဒေသများသို့ခွဲခြားနေကြသည်။ ထုတ်ယူထားသောမြေကိုလေဆိပ်ကြီးများနှင့်ဆိပ်ကမ်းများဆောက်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ပြီးကျောက်မိုင်းများနှင့်သတ္တုတွင်းများကိုဖြည့်တင်းရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ ထိုအကစီမံကိန်း $ 10 ဘီလျံအထိကုန်ကျကျော်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။
ဇန်နဝါရီလ 15 2018 အပေါ်စီမံကိန်း၏အကြမ်းဖျင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့က Kucukcekmece ရေကန်စီမံကိန်း Sazli ဆည်လူသိရှင်ကြားခဲ့ပြီး Terkos ဆည်လမ်းကြောင်းလွန်သွားပါလိမ့်မယ်။
အစီအစဉ်အရ Channel Istanbul ရဲ့အစက Istanbul လေဆိပ်နဲ့ကပ်လျက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ဤလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးဆုံးသောအကြောင်းပြချက်မှာ ၀ င်ရိုးဝင်ရိုးပေါ်တွင်တည်ရှိသောမြေအများစုကိုဘဏ္belongsာရေးဌာနမှပိုင်ဆိုင်ပြီးSazlıdereရေကာတာနှင့်Küçükçekmeceရေကန်သည်လမ်းကြောင်းကိုဖွင့်သည့်အချိန်တွင်အများဆုံးအသုံးပြုလိမ့်မည်ဟုဖြစ်သည်။
Sazlıdereဆည်နှင့်Küçükçekmeceရေကန်အပြင်ဘက်ရှိ 16 ကီလိုမီတာtheရိယာတွင်တူးဖော်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ အရူးအမူးစွဲမက်ဖွယ်စီမံကိန်း၏နောက်ဆုံးလမ်းကြောင်းမှာYeniköy-Sazlıdere Dam-Arnavutköy-Başakşehir-Küçükçekmeceရေကန်ဖြစ်သည်။ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ၀ န်ကြီးဌာနသည်လာမည့်နှစ်Istပြီလတွင်ကျင်းပမည့် Kanal Istanbul စီမံကိန်းအတွက်အခြေခံအဆောက်အအုံများနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစီမံကိန်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောမြူနီစီပယ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။ ၀ န်ကြီးဌာနသို့တင်ပြသည့်ထင်မြင်ချက်များနှင့်အညီ 50 / 100 စကေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းကိုဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ Spatial Planning ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာနမှပြင်ဆင်သည်။
Channel Istanbul - Istanbul လေဆိပ်မှအိမ်နီးချင်း
အစီအစဉ်နှင့်အတူ Kanal Istanbul လမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်တည်ဆောက်မည့်အခြေချအသစ်များ၊ ကုန်သွယ်ရေးareasရိယာများ၊ Zoning Plan အရ Channel ကို3မြောက်ပိုင်းYeniköyမှစတင်လိမ့်မည်။ လေဆိပ်ကပ်လျက်ဖြစ်လိမ့်မည် 44 ကီလိုမီတာအရှည်နှင့် 200 မီတာအကျယ်ကိုမြောက်ဘက်နှင့်တောင်ဖက်စွန်းတွင်တည်ဆောက်ရန်စီစဉ်ထားပြီးဇိမ်ခံရွက်လှေတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်။ ၀ န်ကြီးဌာနအနေဖြင့်ဤလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရန်အရေးကြီးဆုံးသောအကြောင်းပြချက်မှာချန်နယ်ဝင်ရိုးပေါ်တွင်တည်ရှိသောမြေအများစုမှာဘဏ္uryာရေးဌာနဖြစ်သည်။ အစီအစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသောအချက်အလက်များအရလမ်းကြောင်းမှတဆင့်ဖြတ်သန်းသွားသောမြေအများစုကိုစိုက်ပျိုးရေးတွင်အသုံးပြုသည်။ Sazlıdereရေကာတာနှင့်Küçükçekmeceရေကန်မှအကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိစေရန်စီစဉ်ထားသည်။ Sazlıdereဆည်သည်တူးမြောင်းတွင်ရှိနေလိမ့်မည်။
Kucukcekmece ရေကန်သည်လေထုညစ်ညမ်းမှုကြောင့်အန္တရာယ်ရှိသည့်အချက်ပေးမှုကိုပေးလိမ့်မည်။ ဤနည်းအားဖြင့်သိမ်းယူခြင်းဆိုင်ရာကုန်ကျစရိတ်နှင့်အခြားကုန်ကျစရိတ်များလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်။ လမ်းကြောင်း၏နောက်အားသာချက်တစ်ခုမှာလမ်းပေါ်တွင်သစ်တောမြေမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ တူးမြောင်းတစ်လျှောက်တွင်သိပ်သည်းနိမ့်သောအိမ်ရာ၊ စီးပွားဖြစ်andရိယာများနှင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းများရှိလိမ့်မည်။
အစ္စတန်ဘူလ်Avcılar, Küçükçekmeceနှင့် Arnavutkoy ၏ရေလက်ကြား၏စီစဉ်ထားစီမံကိန်းဧရိယာတစ်ခုကအခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ်က Esenyurt ခရိုင်နယ်နိမိတ်နေရာကြာပါသည်။ စီမံကိန်းအောက်တွင်တည်လိမ့်မည်သောအခြေခံအဆောက်အအုံနှင့် superstructure ၏ဤသူအပေါင်းတို့သည်ခရိုင်၏နယ်နိမိတ်အတွင်းနေထိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အစီရင်ခံစာအရသိရသည်ပြီးစီးခဲ့သည်တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်လမ်းကြောင်း၏အရှည် 45 ကီလိုမီတာ။ channel, Avcılar, Küçükçekmece, အ Esenyurt ခရိုင်နှင့် Arnavutkoy ဖြတ်သန်းမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းသည်Küçükçekmeceရေကန်ကနေကြှနျးခွဲခြားသော Marmara ပင်လယ်မှ စတင်. ယင်းSazlıdereဆည်ဝှမ်းတစ်လျှောက်လုံးဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။ ထို့နောက်ရေကန် Terkos ၏အနောက်ဘက်မှပင်လယ်နက်ရောက်ရှိဖို့ရွာ BAKLALI DursunköySazlıbosnaအရှေ့ဖြတ်သန်းပြီးနောက်ရွာရောက်ရှိခဲ့သည်။7၏ Kucukcekmece ကီလိုမီတာ,3100 တထောင်မုဆိုးမြှောင်,6ပတ်သက်. မြှောင် 500 29 တထောင် Basaksehir ကျန်ရှိသည့်ကန့်သတ် Arnavutkoy အတွင်းဖြစ်လိမ့်မည်ကီလိုမီတာ။
စီမံကိန်း၏စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်မှာ 20 ဘီလီယံဖြစ်သည်။ တံတားများနှင့်လေဆိပ်များကဲ့သို့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၊ 100 ဘီလီယံအထိအမေရိကန်ဒေါ်လာ ခန့်မှန်းထားသည်
စီမံကိန်းပြီးမြောက်ရန်အတွက်5တစ်နှစ်
ဆောက်လုပ်ရေးအဆင့်လောက်5တထောင်လုပ်သားများကို run ပါလိမ့်မယ်။ စီမံကိန်းပြီးစီးလူတွေထောင်ပေါင်းများစွာ၏ရန်အလုပ်အကိုင်ပေးပါလိမ့်မယ်။ 1,350 DTW အတွက်သင်္ဘောတောင်မှအရွယ်အစားအကူးအပြောင်းမှုအတွက်ထိုက်ခွင့်ရှိလိမ့်မည်။ channel ကို၏အတိမ်အနက်ကိုပေါ် မူတည်. စပ်၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1,5 ဘီလီယံကုဗမီတာဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်။ ပင်လယ်မှသောင်နှင့်ပစ္စည်း 115 သန်းကုဗမီတာမှထမြောက်ဖို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
တူးဖော်3ကျွန်းဆွဲဆောင်မှုများထဲက
အဆိုပါ EIA ကိုတွင်ထည့်သွင်းသည့်အသုံးအနှုနျးမြား၏အဆိုအရက3186 ဟက်တာဖြစ်ဖို့ပထမဦးဆုံးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်ကျွန်းအဘို့ကို၏စုစုပေါင်းဧရိယာကနေဖွဲ့စည်းသည်။ ဒုတိယအုပ်စုသည်ကျွန်းစုများထားရှိရေးဦးမည်နှင့်ကျွန်း၏စုစုပေါင်းဧရိယာ4155 ဟက်တာဖြစ်လိမ့်မည်။ တတိယအုပ်စုတစ်စုကျွန်း3104 ဟက်တာသိမ်းပိုက်ဖို့ကျွန်းကနေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတူးဖော်တွေ့ရှိပစ္စည်းကျွန်း, ရေကန် microfiltration နှင့် ultrafiltration ၏ကမ်းခြေဖြည့်စွက်အသစ်အများ၏ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်အသုံးပြုမည်ဖြစ်ကြောင်းပင်လယ်နက်ကမ်းရိုးတန်းဒေသအပြင်ဘက်ဖြစ်ပါတယ်။
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်တံတားပေါ်ပြုသောအမှုခံရဖို့ 6
တံတား၏အမှုအရာလမ်းကြောင်းလည်းထင်ရှားခဲ့ပါတယ်။ အရေးပေါ်တံတားများအတွက်လုပ်ဖို့ဆိပ်ကမ်းဆီအပြင်ဘက်ရုပ်သံလိုင်း။68 အပါအဝင်သင်္ဘောအသွားအလာများပြဋ္ဌာန်းချက်တစ်ခုအသွားအလာမတော်တဆမှုသို့မဟုတ်ချက်ချင်းကြားဝင်နှင့်အရေးပေါ်အတွက်ချဉ်းကပ်ခံရဖို့တစျအိတ်ကပ်ကိုဖန်ဆင်းရန်ပျက်ကွက် secure မှကီလိုမီတာ။ ဒါဟာအိတ်ကပ်၏အရှည်မှာအနည်းဆုံး 750 မီတာပါလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အပြင်ဒီကနေစီမံကိန်းအတွက်ချန်နယ်၏စစ်ဆင်ရေးများအတွက်အရေးပေါ်တုန့်ပြန်စင်တာများ, channel ကိုဝင်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်အဆောက်အဦများ, အနိမ့်နှင့်လုပ်ထိုကဲ့သို့သောရေယာဉ်အသွားအလာစနစ်များ, ရေကာတံတိုင်း, မီးပြတိုက်နှင့် Marmara ၏ပင်လယ်ပြင်၏စောင့်ဆိုင်းဧရိယာနှင့်အတူပင်လယ်နက်အဖြစ်အထက်အဆောက်အဦများ။
23 kmxnumx expropriation အရာ
35 14 နှင့်အတူAltınşehirတထောင်ကလူကိုထိခိုက်လိမ့်မည်ဟုအမြင့်ဆုံးဒေသများ Sahintepe အတွက်တထောင်ကလူအသက်ရှင်။
အများဆုံးကတော့တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်နှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောတစ်ခုမှာကိုလည်းဧရိယာသိမျးခဲ့သညျ။ SAZLIDERE xnumx ရဲ့မှတဆင့်သွားစဉ်အခါ, xnumx ရဲ့ Kucukcekmece ရေကန် 45 ကီလိုမီတာလမ်းကြောင်း၏အစီရင်ခံစာအရသိရသည်။ တစ်ကီလိုမီတာသစ်တောဧရိယာလျှင်။ နောက်ကျောကဒီဒေသမှာတည်ရှိပြီးသိမျးနှင့်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 8 စတုရန်းကီလိုမီတာလိမ့်မည်။ ကအများဆုံးKücükcekmeceမုဆိုး BAKLALI Terkos လိုင်းတို့တွင်အများမှာဖြစ်ပါတယ်ရှိရာနေရာများကိုလူဦးရေသိပ်သည်းမှု။ စီမံကိန်းကြောင့်ထိခိုက်မည်ကိုအများဆုံးဒေသများအတွက်Altınşehir 12 ကနေတထောင်ကလူလာသေး၏တထောင်ကလူရှငျနထေိုငျ 23 နှင့်အတူ Sahintepe တွင်နေထိုင်ကြသည်။
Kanal Istanbul စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်မှုနှင့်အတူ Istanbul, Avcılar, Küçükçekmece, Başakşehirနှင့်Arnavutköyခရိုင်၏နယ်နိမိတ်အတွင်းစီစဉ်ထားသည်; ဒါကြောင့် Bosporus တစ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ရေကြောင်းမတော်တဆမှုနှင့်ရေကြောင်းသွားလာမှုပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါဖြစ်ရပ်များ၏ Bosporus, ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအတွက်အလွန်အမင်းလွှမ်းမိုးလျှော့ချ, တူရကီများအတွက်အဖြစ်တူရကီရေလက်ကြားကိုအသုံးသမျှသောနိုင်ငံများအတွက်အသက်, ကုန်ပစ္စည်း၏ပြဋ္ဌာန်းချက်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လုံခြုံရေးအကြီးအအရေးပါမှုသည်။ အဆိုပါစီစဉ်ထားသောစီမံကိန်းသည် Bosphorus ရှိအသက်နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုများကိုခြိမ်းခြောက်သောသင်္ဘောအသွားအလာကိုအနိမ့်ဆုံးဖြစ်စေရန်နှင့်ဝင်ပေါက်နှစ်ခုစလုံးတွင်မိုးသည်းထန်စွာအသွားအလာများနှင့်ထိတွေ့နိုင်သောသင်္ဘောများသို့သွားလာရန်ရည်ရွယ်သည်။
Sazlıdereဆည် - - ပစ္စုပ္ပန်အမှု, Kucukcekmece ရေကန်မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 45 ရှည်လျားကီလိုမီတာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအသေးစိတ်အင်ဂျင်နီယာလေ့လာမှုများအတွက်ခုနှစ်တွင်ပြီးစီးရမည့်အဆောက်အဦးအလုပ်၏စင်္ကြံမှအောက်ပါအရှေ့ Terkos နှစ်တွင်တစ်နှစ်5ဆံ့ 100 လိုအပ်သောပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအစ္စတန်ဘူလ်၏အခြေအနေဤအရပ်မှတူရကီအစေခံရန်မျှော်လင့်နေသည်။
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့အပြည့်အဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်အစီရင်ခံစာ ဒီမှာ နှုတ်ယူပြီးသား။ (141 ကို MB ဖိုင်အရွယ်အစားဖြစ်ပါသည်)
amomamoğlu: Kanal Istanbul စီမံကိန်းသည် 'ငါလုပ်ခဲ့သောစီမံကိန်း' မဖြစ်နိုင်ပါ
တတိယတံတား၊ တတိယလေဆိပ်နှင့် Canal Istanbul ini ကဲ့သို့သောစီမံကိန်းများ
၏ CHP အစ္စတန်ဘူလ်လက်ထောက်Yedekç: "Ya Ya တူးမြောင်းအစ္စတန်ဘူလ်" ကျနော်တို့ကသူတို့ကပြောပါ "မသေချာပေါက် De Rant" ဟုပြော
ထပ်3ဂရိတ်အစ္စတန်ဘူလ်ဟာ Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်များအတွက်တင်ဒါထွက်ပါမည်
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်မှန်ထမ်းအိမ်ရာဧဝံဂေလိတရား Channel ကို
အစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းများ OK ကိုအတွက်3အလွှာများနှင့် Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်း သာ. ကွီးမွတျအစ္စတန်ဘူလ်
3 အစ္စတန်ဘူလ်နှင့်အစ္စတန်ဘူလ် Channel ကိုဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကို PPP မော်ဒယ်အကြီးစားအလှဆင်စီမံကိန်းဖို့
Channel Istanbul အစည်းအဝေးသို့ဖိတ်ကြားခံရသည်
၁၄၃၃ ခုနှစ်မှ စ၍ Channel Istanbul 'Istanbul အတွက်လမ်းကြောင်းသစ်မှ Imamoglu ၏ထွက်ပေါက်သစ်၊
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်စီမံကိန်းကို4ထပ်မြေတန်ဖိုးArnavutköy'deတိုးတက်စေနိုင်ခြင်း
Channel ကိုအစ္စတန်ဘူလ်ဆွဲဆောင်မှုများ MI